यो सम्बद्ध मार्केटिंगको साथ पैसा बनाउन कठिन छ? - Learn Expert Blogging
यो सम्बद्ध मार्केटिंगको साथ पैसा बनाउन कठिन छ?
Post category:एफिलियट मार्केटिंग / Earn Money Online
एफिलियट मार्केटिंग भनेको उत्पाद मार्केटिंगको बारेमा हो. तपाईं श्रोताहरूको अगाडि उत्पादन लिनुहुन्छ, सुविधाहरु बुझाउनुहोस्- तिनीहरूलाई कसरी लाभदायक? यदि तिनीहरूलाई यो मनपर्‍यो, तिनीहरूले एक खरीद गर्छन् र बिक्री को बदलामा, तपाईं एक आयोग प्राप्त. यो एफिलियट मार्केटिंगको एक साधारण अवधारणा हो.
यो गाह्रो छैन तर सहि विपणनको साथ पैसा कमाउने सजिलो प्रक्रिया हो अन्य राजस्वहरू उत्पादन गर्ने अन्य तरिकाहरूको तुलनामा. तपाईं थोरै प्रयासको साथ ठूलो कमाउन सक्नुहुन्छ. वास्तबमा, तपाईंले सहि श्रोताहरूलाई लक्षित गर्नुपर्छ, व्यक्ति जो विशेष गरी उत्पादनको लागि खोजिरहेका छन् खाँचोमा पर्दछ.
सही श्रोताले सबैभन्दा बढी महत्त्व राख्छ. केही व्यक्तिले दर्शकहरूलाई फिल्टर पनि गर्छन् र रूपान्तरण दर अधिकतम बनाउन तिनीहरूलाई पछि लक्षित गर्छन्. व्यक्तिहरूलाई फिल्टर गर्नु भनेको फनेलको रूपमा विकसित गरिएको अवधारणा हो.
केहि चीजहरू, तपाईंले कडा बनाउन को लागी पैसा बनाउन को लागी सजीलो को बारे मा ख्याल राख्नु पर्छ. हामी उनीहरूसँग छलफल गरौं.
सम्बद्ध आयोग प्रस्ताव कम्पनीहरू
प्रासंगिक खरीददारहरूलाई लक्षित गर्दै
सहबद्ध मार्केटिंगबाट पैसा कमाउनुहोस् सजिलो र सफल
किन यो गाह्रो हुन्छ?
फनेलहरू सिर्जना गर्दै
सहि श्रोताहरूको साथ, तपाईं आयोग प्रतिशतको महत्त्वलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न. कुनै श .्का छैन, मैले धेरै सय व्यक्तिहरूको उदाहरणहरू देखेको छु भन्दा बढी उत्पादन गर्दै $2000 प्रति महिना सजिलै अमेजन सम्बद्धका साथ.
यद्यपि, अन्य आयोगहरू प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरू अमेजन सहयोगीहरूभन्दा टाढा छैनन्. अमेजन मात्र प्रस्ताव गर्दछ 8 लाई 10% अधिकतम आयोग जबकि, Clickbank जस्ता कम्पनीहरू भुक्तान गर्न तयार छन् 60% उत्पादन को आयोग को. त्यसो भए, सही प्रकारको उत्पादन र कमिसन दर लिने बेला तपाईं बुद्धिमानी हुनुपर्छ.
के धेरै नयाँ शुरुवात गर्छन्- मात्र सम्बद्ध वेबसाइट बनाउनुहोस् गैर-कन्फिडि content सामग्री उत्पादन गर्दछ, आफ्नो वेबसाइट मा र बस प्रचार शुरू गर्नुहोस्. तिनीहरू सही खरीददारहरूको महत्त्व बुझ्दैनन्. यसले साँच्चिकै तिनीहरूलाई अनलाइन बनाउन पैसा बनाउँदछ.
सहि मार्केटिंगको सफलताको सहि लक्ष्यीकरण सबैभन्दा आवश्यक पक्ष हो. मैले धेरै केसहरू देखेको छु जब व्यक्तिहरू आफ्नो उत्पादन प्रस्तुत गर्छन् ती व्यक्तिलाई रुचि छैन।
उदाहरण को लागी-जब कसैले कुर्सी खोज्दै छ र तपाईं मोबाइल फोन सुविधाहरु लाई बढावा दिदै हुनुहुन्छ, यो पूर्ण रूपमा समयको बर्बादी हो, उर्जा, कडा परिश्रम र निश्चित रूपमा तपाईं निराश र सहबद्ध विपणनबाट पैसा कमाउन कडा बनाउँछ.
म सम्झन्छु, जब मैले एफिलियट मार्केटि started गर्न सुरु गरेँ मैले धेरै सुन्दर ब्लग बनाएँ. हामीले टोलीले मिलेर क्वालिटी र कन्फिडि content सामग्री सिर्जना गर्न काम गर्‍यौं. हामी Semrush बाट कम प्रतिस्पर्धा कुञ्जी शब्दहरूको विस्तृत खोजीको लागि गएका थियौं, र गुगल स्वत: पूर्णबाट. हामी लगभग 40 + निरन्तरका लागि लेखहरू2महिना
हामी पूर्ण रूपमा जैविक लक्ष्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका थियौं. यसको मतलब जब कोही प्रकारहरू हुन्छन् “अन्तर्गत उत्तम ल्यापटप 1000 डलर”. तिनीहरूले हाम्रो ब्लग लेख को रूपमा भ्रमण गर्नुपर्नेछ “अन्तर्गत उत्तम ल्यापटप 1000 डलर”.
वास्तवमा हामी के गर्दैछौं- हामी सही दर्शकहरूलाई लक्षित गर्दैछौं. यसको मतलब कोहीले खोजी गर्दैछ “राम्रो ल्यापटप अन्तर्गत 1000 डलर”, र हामी उनीहरूको सेवा गर्दैछौं. यहाँ, यो अवस्था मा, रूपान्तरण दर यी दिनहरु अझै उच्च छ.
यदि कसैले ल्यापटप सम्बन्धित जानकारी को लागी सोध्छ भने. हामी बिक्री गरिरहेका छैनौं वा अरू केहि प्रदर्शन गरीरहेका छैनौं.
व्यक्तिहरू फेसबुकको सहयोग लिन्छन्, ट्विटर, आदि. विभिन्न स्रोतहरूबाट तिनीहरूको वेबसाइटमा ट्राफिक ड्राइभ गर्न र कुनै बिक्री बिना अन्त. कारण यो छ- ट्राफिक तपाइँ सोशल मिडियाबाट प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ, जो कोहि मानिसहरु लाई विशेष लाखौं मानिसहरुबाट ल्यापटप खोजिरहेको थाहा छ।
तर यदि हामी गुगल मार्फत खोजी गर्ने बारेमा कुरा गर्छौं, कसैले विशेष रूपमा एक कुञ्जी शब्द टाइप गर्दछ र अधिक प्रासंगिकताको साथ परिणामहरू प्राप्त गर्दछ. त्यसकारण रूपान्तरण दर सामाजिक मिडियाको भन्दा खोज ईन्जिनहरू मार्फत लक्षित गर्दा उच्च रहन्छ.
यद्यपि, तपाईं दुई सम्भावनाहरू अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न. एउटा सामाजिक मिडिया समूहहरूमा सही दर्शकहरूलाई लक्षित गर्नु हो. तपाईंसँग प्रासंगिक समूहहरूमा सामेल हुन र उनीहरूमा तपाईंको सब भन्दा सान्दर्भिक लेख साझा गर्न विकल्प छ.
दोस्रो विकल्प भुक्तान गरिएको विज्ञापनहरूको लागि जानु हो. फेसबुकले तपाईंलाई एक विशिष्ट आयु समूह साथै रुचि-आधारित दर्शकहरूलाई लक्षित गर्न अनुमति दिन्छ. यसले तपाईको ब्लग पोष्ट विज्ञापन केवल ती प्रयोगकर्ताहरूलाई देखाउँनेछ जो ल्यापटपमा रुचि राख्छन् (एक उदाहरण को रूप मा). तर यहाँ फेरि एक सीमितता छ, हामीलाई थाहा छैन कि उनीहरूलाई किनेको समय. चाहे उनीहरूले खरीद गरेका छन् वा खरीद गर्न चाहन्छन् वा केवल हालको चलिरहेको टेक्नोलोजीको ज्ञान प्राप्त गर्न इच्छुक छन्.
क्लिक फनेलहरू सिर्जना गरेर सहबद्ध बजार मार्फत सजिलो पैसा कमाउने अर्को तरिका. क्लिक फनेल मूलतः जसले फिल्टरको लागि खोजी गर्दै छन् फिल्टर गर्दैछ.
तिनीहरूले के गर्छन् तिनीहरू भुक्तान गरिएका विज्ञापनहरू वा जैविक यातायातका लागि जान्छन्. जब कोही तिनीहरूको वेबसाइट भ्रमण गर्दछन्, तिनीहरू विशेष प्रचार प्रसारको सबै सुविधाहरू प्रदर्शन गर्छन् र अघि बढ्नु अघि आधारभूत विवरणहरूको लागि सोध्छन्. प्रक्रियाको क्रममा, तिनीहरूले तपाइँको ईमेल कब्जा, त्यसपछि दोस्रो चरणमा सार्नुहोस् त्यसपछि तेस्रो. दोस्रो चरण पूरा गरेपछि, तिनीहरू अन्तिम भुक्तानी पृष्ठमा सरे.
यहाँ के भइरहेको वास्तविकता छ, तिनीहरू इच्छुक मानिसहरूलाई क्रमबद्ध गर्दैछन्. यसलाई अधिक स्पष्ट पार्दै, यदि 100 उत्पादनको सुविधाहरू पढ्नको लागि व्यक्तिहरू वेबसाइट भ्रमण गर्छन्, सय बाहिर, 30 व्यक्तिहरूले आधारभूत विवरण भर्नेछ, तिनीहरूको ईमेल प्रविष्ट गर्नुहोस्.
बाहिर 30, मात्र5व्यक्ति भुक्तानी पृष्ठमा सर्नेछन्. ती हुन सक्छन् वा तत्काल खरीद हुन सक्छ. तर तिनीहरूले वेबसाइट मालिकलाई चासो देखाए. तिनीहरू त्यस उत्पादनमा रुचि राख्छन् तर त्यो समयमा भुक्तानी गर्न तयार हुँदैनन्।
अब अर्को समय, सबै सय मानिसहरूलाई छोडेर, तपाईको सहि दर्शकहरु मात्र पाँच मानिस छन्. यदि तपाइँ एक विशेष उत्पादन बाट एक सभ्य आयोग प्राप्त. तपाइँ त्यो कमिशनलाई गुणा गर्न सक्नुहुन्छ 5. यदि तपाइँको आयोग भन्दा बढी छ $100 नुनको लागि, त्यसो भए तपाई सजिलै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ सहबद्ध मार्केटिंगबाट पैसा कमाउन कत्ति सजिलो छ.
एफिलियट मार्केटिंग (र कसरी सुरू गर्ने)
अरू के पढ्दैछन्?
कसरी डोमेन नाम खरीद गरेपछि वेबसाइट निर्माण गर्ने?
के म एक डोमेन बिना WordPress को साथ एक वेबसाइट निर्माण गर्न सक्दछु?
विद्यार्थीले पैसा अनलाइन कमाउन सक्छ
होस्टिंग बिना WordPress साइट कसरी बनाउने?
Previous Postतपाइँ एक WordPress ब्लगबाट कति पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ?
Next PostGoogle AdSense को साथ तपाईं कत्ति पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ?
के तपाईं AdSense को साथ एफिलिएट मार्केटिंग गर्न सक्नुहुन्छ?
विद्यार्थीले पैसा अनलाइन कमाउन सक्छ?
Copyright 2021 - richouswishes.com- Learn Expert Blogging. Disclosure: This post may contain affiliate links, which means we may receiveacommission if you clickalink and purchase something that we recommended. Read more about Affiliate disclosure here.